Akuko banyere Texas Hold'em sport kọwara ya - jluis37.com
Emepụtara Texas Hold’em, nke bụ poker, na mmalite nke narị afọ 20 na Robstown, Texas. Blondie Forbes, onye bụ onye na-agba chaa chaan’okporo ụzọ si Texas, mepụtara egwuregwu ahụ miniature nwee echiche dị ukwuu na e webatara ya na Poker Hall of Fame na 1980!
Mana Texas Hold’em agaraghị eche echiche ma ọ bụrụ na e mepụtaghị poker. Yabụ, nọdụ ala ma zuru ike mgbe anyị ga-akpọga gị na njem websiten’akụkọ ihe only eme nke poker Texas Hold’em…
Kedu ihe bụ akụkọ banyere Poker?
Egwuregwu kaadị bụ akụkụ nke akụkọ ihe only eme nke ọdịda anyanwụ, na United States, dị ka tumbleweeds, ugbo ehi na ehi na-eme. Website t 1825 ruo 1915, egwuregwu kaadị (nke bụ egwuregwu ịkụ nzọ) – nke a na-akpọ Faro – bụ nke a na-egwuri egwu na ebe ịkụ nzọ na West. Egwuru egwu a t kaadi 52-kaadi
Poker sitere na New Orleans na 1825 ma kpọọ un t kaadị 20-kaadị. Ejiri aka anọ nke kaadị ise n’otu n’otu. Egwuregwu ahụ gbasaa ngwa ngwa na West t, t mmalite nke ọsọ ọsọ ọla edo na California na 1848, oche nke ejiri un rụọ sitere na nke 20-kaadị gaa na kaadị 52-kaadị.
N’akụkụ ya, poker nwere iwu ọhụrụ:
Mkpokọta na-emeri nke kwekọrọ na kaadị, nke a na-akpọ iwepụ, na nnọchi nnọchi kaadị nke akpọrọ Draw.
Mgbe agha obodo gasịrị – nke a lụrụ na 1861 ruo 1865 – agbakwunyere usoro mmeri (nke a na-akpọ ogologo).
Egwuregwu Nwoke Na-eche Echiche
Texas Hold’em ahapụghị ókè nke Texas ruo mgbe ngwụsị 60s mgbe ọ kwagara Las Vegas. Ọ nwetara ewu ewu na https://onlineblackjack.co.nz/bitcoin/ casinos mgbe asọmpi maka egwuregwu a na-egwuri egwu n’ọnụ ụlọ nke Dune cha cha. Akpọrọ un”egwuregwu mmadụ nwere uche” makana, iji merie aka gị, ị ga-egwu nke ọma.
Etu esi egwu Texas Hold’em?
A na-emeso onye ọkpụkpọ ọ bụla kaadị abụọ, chee ihu. Ha ekwesighi ikpughe ihe ndị a na ndị egwuregwu ndị ọzọ n’oge aka – naanị na njedebe. Onye na-ere ahia miniature gbasaa kaadị atọ nke ndị egwuregwu nwere ike iji mee aka kaadị ise zuru oke.
Ndị egwuregwu ahụ nwere ike ibido ịkụ nzọ. Mgbe nke a gasịrị, a na-agbasa kaadị ọzọ na-esochi ohere kachasị mma. A na-emeso kaadị ikpeazụ ahụ, ndị egwuregwu nwere ike ịkụ nzọ maka oge ikpeazụ. Iji nwee ike ịnọn’aka, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-etinye otu self service nke ibe dị ka egwuregwu ndị ọzọ.
Onye nwere aka kacha mma merien’ite.
Texas Hold’em gụnyere ọtụtụ atụmatụ nke ndị egwuregwu ahụn’ihi d e ị ga-amụrịrị ihu ndị na-emegide gị iji hụ ka ha si meghachi omumen’aka kaadị ha nwere. Ọ bụrụ na ha dị ka ọ happyụ, ị mara na ha na-eche na ha nwere mmeri na – emeri – ha ga – akụnyekwu ihe ịmanye ndị ọzọ ịba ụba nzọ ha. Yabụ, ọ bụrụ n ‘ịnara ntakịrị nsogbu mgbe ahụ Texas Hold’em bụụrụ gị!
Tips Taruhan Olahraga Elite – 8 Juli – Blog taruhan